अमेरिकी मा, हामी हाम्रो प्रेम रोमान्स । हामी प्रेम हाम्रो रोमी- र खुसीसाथ-कहिल्यै-पछि । आनन्द को खोज छ मा लेखिएको, हाम्रो स्वतन्त्रता को घोषणा, र खोज को एक आनन्दित अन्त्य लेखिएको छ मा हाम्रो मनपर्ने. तर जब यो गर्न आउँछ एक वास्तविक जीवन, कुनै-तामझाम सम्बन्ध छन्, हामी साँच्चै लागि सेट अप सबै भन्दा राम्रो सफलता । हामी अक्सर दूर सार्न हाम्रो परिवार र समर्थन प्रणाली, संग ग्रसित थिए हाम्रो फोन र हाम्रो जब, हामी निरन्तर चिन्ता स्वास्थ्य हेरचाह, वा बच्चा हेरविचार छ. यो सिद्ध तस्वीर भन्ने हाम्रो प्रिय रोमी- रंग छ । फ्रान्सेली, सामान्य, छन् बन्द गरेर पूर्णता, को रूप मा देखेको छ, आफ्नो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण शैली र सौन्दर्य दिनचर्या, र रूपमा प्रस्ट छ आफ्नो सम्बन्ध. र हुनत प्रेम नै छ, कुनै कुरा के लिंग वा संस्कृतिका यो महसुस, विचार र विश्वास बारे सम्बन्ध त हुन सक्छ वैविध्यपूर्ण छ । कि देश मा हामीलाई ल्याए प्रेम शहर, शायद यो टिप्पण लायक छ, को पक्षमा बारेमा सम्बन्ध त्यो हो, गर्न विशेष फ्रान्स र तिनीहरूले कसरी विश्वास साँचो प्रेम साँच्चै काम गर्दछ । अमेरिकी मा, हामी अक्सर यो विचार त्यो व्यक्ति हामी मिति हुनुपर्छ हाम्रो सबै भन्दा राम्रो मित्र छ । माध्यम वार्षिकोत्सव (आई ई खुसी, दुई वर्ष गर्न मेरो सबै भन्दा राम्रो मित्र छ । हृदय इमोजी -अनुहार इमोजी*.) सुत्र मा तपाईं को प्रवृत्ति छ कि रोमान्स संग सबै भन्दा राम्रो मित्रता छ । म, आफु छु एक विश्वासीले खोजी मा एक साथी रूपमा डबल एक सबै भन्दा राम्रो मित्र छ । सबै पछि, तपाईं त धेरै समय खर्च संग यो व्यक्ति, गर्ने व्यक्ति तपाईं हांसो संग सबैभन्दा बताउन, सबै कुरा, रुचि छ कि सबै तपाईंलाई रुचि, र सामान्यतया बस एक असल मित्र हो । जीवन नीरस हुन भने तपाईं खर्च संग यो जो कसैले भन्दा कम थियो आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र छ । तर फ्रान्सेली बनाउन एक रोचक बिन्दु राखन को लागि जीवन साथी र सबै भन्दा राम्रो मित्र लागि सुरक्षित अलग मान्छे । लागि एक, तिनीहरूले भनेर थाह रहस्य छ, एक राम्रो कुरा मा एक सम्बन्ध छ । बाथरूम जान ढोका संग खुला छ र तिनीहरूले महसुस छैन बताउन आवश्यक आफ्नो साथी सबै (को पाठ्यक्रम, यो छ भन्दा फरक रहस्य राखन छ, जो कहिल्यै ठीक छ पनि मा, फ्रान्सेली व्यक्ति आधुनिक सम्बन्ध), र गर्न रुचि कम से कम केही अलग चासो मित्र, र दिनचर्या हो । यो एक लाग्न सक्छ पनि गहन वा फ्रान्स-खास म पक्का छु आफ्नो आमा र चिकित्सक भएको बताउँदै तपाईं यो तपाईं थिए देखि एक. तर फ्रान्सेली महिला छन् मा यति राम्रो । तिनीहरूले कहिल्यै कल्पना पनि पत्ता पूरा मा एक मानिस वा एक सम्बन्ध छ । तिनीहरूले सुनिश्चित पूरा गर्न आफूलाई पहिलो, र त्यसपछि एक साथी पाउन साथ आउन लागि आफ्नो यात्रा, एक नयाँ जीवन चाहिन्छ भनेर तिनीहरूलाई परित्याग गर्न आफ्नै जीवन. के मात्र फ्रान्सेली कायम आफ्नो स्वतन्त्र छौं गर्दा सम्बन्ध मा, तर तिनीहरूले पनि सुनिश्चित सधैं आफ्नो साथी थाह, तिनीहरूले अत्यन्तै विश्वस्त छन् आफूलाई मा. यो हो कि एक पहिलो तारीख वा एक दस-वर्ष विवाह, फ्रान्सेली महिला गुनासो गर्न आफ्नो रोमान्टिक साझेदार बारेमा आफ्नो बढ्दै पेट बोसो, अवधि ब्लोट, वा कसरी पुराना तिनीहरूले विचार तिनीहरूले हेर्न । जे (छोटा) को राशि छ आवश्यक छ लागि सुरक्षित केटी साथी रक्सी को एक गिलास मा. तिनीहरूले विश्वास रूपमा लामो तपाईं बताउन र देखाउन आफ्नो साथी तपाईं पुन सुन्दर, जवान, पातलो, आदि, यो के छ, तिनीहरूले तपाईं को विचार. र शायद, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, यो के तपाईं तपाईं को विचार पनि । विवाह, सामान्य मा, माथि निर्माण मा हामीलाई अन्त को सबै हाम्रो मनपर्ने रोमी- छ एक चित्र-सिद्ध विवाह । म कहिल्यै असफल माध्यम अन्त को बेलगाम दुलहीको वा सानो तापनि, तिनीहरूले सवारी सूर्यास्त मा बन्द मा घोडाहरू जस्तै é सबै समय को सबै, र अन्य मा त्यो पात उनको बुबा र मित्र संग एक मानिस त्यो कहिल्यै छ.
हामी सबै गर्न चाहनुहुन्छ विश्वास विवाह स्वतः हुन्छ खुसीसाथ कहिल्यै पछि । हामी परवाह छैन के थाहा के गर्न एरियल र एरिक विवाह पछि किनभने हामी बस चलाउन, तिनीहरूले सधैंभरि प्रेम र सबै सिद्ध छ. मरेका, एरियल खुट्टा छ, र तिनीहरूले विवाह मा एक भयानक डुङ्गा अरू के हुन सक्छ गलत छ । तर पनि यदि हाम्रो हृदय हो बेचे मा कहानी, गहिरो तल हामी राम्रो थाहा छ । हामी थाह विवाह लिन्छ मेहनत र धैर्य र तिनीहरूलाई अन्त मा सम्बन्धविच्छेद । र अझै पनि हामी मा किन्न यो विचार कि एक विवाह अन्त को कहानी छ । तर फ्रान्सेली थाहा कहानी मा जान्छ भन्दा धेरै लामो पछि विवाह छोडेका छन् घण्टी दिइरहेको, वा त्यो विवाह छैनन्. सामान्य मा, कम मान्छे हो रही मा विवाह फ्रान्स । अमेरिका को लागि, एक विवाह छ देख्न रूपमा यो प्राकृतिक अर्को चरण मा एक सम्बन्ध जहाँ तपाईं प्रतिबद्ध हुन लागि सँगै आफ्नो जीवन र यसैले हुन चाहनुहुन्छ र कानुनी बाध्य । फ्रान्स, धर्म गिरावट छ सामान्य मा, र त्यसैले कम मान्छे हेर्न आवश्यक धार्मिक बाध्यकारी । त्यहाँ पनि एक वृद्धि मा नागरिक भागीदारी, जसको अर्थ एक कमी मा कानूनी विवाह. फ्रान्सेली विश्वास एक विवाह छैन सबै यो हुन माथि टूट मा हामीलाई, र यो विचार अधिक को एक धेरै कदम मा एक सम्बन्ध छ भनेर एक जोडी हुन सक्छ वा लिन सक्छ, अधिक यति भन्दा एक आनन्दित समाप्त भएको छ । किनभने यो, जब एक जोडी गर्छ विवाह, ग्रहण विवाह गर्न आफ्नो खुसीसाथ कहिल्यै पछि । तिनीहरूले रोक्न कहिल्यै दिइरहेको मा कडा काम राख्न जीवित रोमान्स, विवाह वा छैन, र तिनीहरूले छैन विवाह को खातिर एक कहानी समाप्त । हामी आशा सक्छ कि देश समावेश प्रेम शहर सबैभन्दा आदर्शवादी र रोमान्टिक, तर गर्न आउँदा यो सम्बन्ध, तिनीहरूले छौं वास्तवमा धेरै व्यावहारिक छ । यो साँचो हो कि फ्रान्सेली केही छन्, सबैभन्दा रोमान्टिक को संसारमा छ, तर तिनीहरूले छौं सक्षम प्रेम पर्नु गर्न र रहन अत्यन्तै तार्किक छ । जबकि अमेरिका छन्, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ छैन, जबकि उठयो पत्रदल को बन्द फूल, फ्रान्सेली भनिरहेका छन् । यो सायद सार तरिका फ्रान्सेली हो सिकाउनुभयो लाग्छ प्रेम बारे एक प्रारम्भिक उमेर देखि छैन को या त आजीवन प्रेम वा पूर्ण अस्वीकार, तर को एक सीमा मा संभावित के प्रेम जस्तै हुन सक्छ. अमेरिकी सधैं छन् खोजिरहेका या त खुसी अन्त वा कुल बन्द देखि एक सम्बन्ध, तर फ्रान्सेली मा सहज सम्बन्ध अस्पष्टता र एक सीमा सम्बन्ध को परिणाम देखि औसत भावुक छ । फ्रान्सेली मिति रूपमा, हामी यो विचार मा हामीलाई । वास्तवमा, एक शब्द मा फ्रान्सेली भाषा लागि एक मिति.
नजिकका बराबर हुनेछ, जो पनि वर्णन केहि देखि एक डाक्टर नियुक्ति गर्न हथियाने संयुक्त राष्ट्र क्याफे एक मित्र संग
एक (एक रोमान्टिक मुठभेड) पुरानो जमानाको छ, एक सानो पनि तीव्र, र शायद प्रयोग गरिन्छ । मानिसहरूलाई पूरा संभावित साझेदार मा समूह र सामाजिक सेटिङ भन्दा, एक-मा-एक रात्रिभोज छ । समय खर्च गर्न एक-मा-एक, तिनीहरूले चाहन्छु अप्ट लागि एक आकस्मिक टहलने वा जान एक संग्रहालय छ कि केहि बचाउछ कि अजीब पहिलो-मिति अनुभव हामी सबै थाहा राम्रो, जो अधिक जस्तै महसुस एक अजीब काम साक्षात्कार भन्दा बैठक एक संभावित रोमान्टिक साथी । एक पटक यो डेटिङ हुन्छ, यो धेरै ज्यादा ग्रहण गर्न अनन्य हुन कुनै आवश्यकता छ, यो कुरा किनभने निहित छ. एक-मा-एक गम्भीर कदम हो । यो विश्वास वा छैन, यो छैन लोकप्रिय फ्रान्स मा पोस्ट गर्न गरेको छ कि सम्झना वा गरौं, सबै मित्र कसरी थाहा तिनीहरूले आशिष् छन्.
वास्तवमा, धेरै दम्पतीले छन् बुद्धिमान् पनि आफ्नो मित्र समूह र छैन सधैं देखा चाहनुहुन्छ रूपमा एक सरकारी दम्पतीले
गोपनीयता निर्णायक एक सम्बन्ध, र एक जोडी हुनेछ अक्सर परिभाषित सम्बन्ध आधारित घनिष्ठता कि तिनीहरूले राख्न दुई बीच तिनीहरूलाई छ । व्यक्तिगत सम्बन्ध (र प्रेम सामान्य मा) ग्रहण गर्दै पूर्ण हुन निजी छ । हाम्रो प्रिय विवाह घोषणाहरू समाचार पत्र मा योग्य छन् आघात फ्रान्सेली रूपमा, विवाह बारे लेखिएको समाचार पत्र मा मात्र हुनेछ हुन लागि राजकीय वा शीर्ष सेलिब्रेटीहरू छैन, दैनिक मान्छे किन तपाईं चाहनुहुन्छ एक मित्र, धेरै कम एक आगन्तुक थाह, आफ्नो व्यक्तिगत र घनिष्ठ विवरण. मा पुस्तक, कसरी विवाह गर्न (के म देखि सिकेका अचल महिला पाँच महाद्वीप मा बारे बाँकी मेरो पहिलो साँच्चै कठिन वर्ष को विवाह), त्यो साक्षात्कार, एक फ्रान्सेली महिला जसले भन्छ, यो काम । उहाँले अझै पनि आवश्यक जित्न हरेक दिन मलाई र चाहनुहुन्छ मलाई हरेक दिन । म मा राख्न आवश्यक प्रयास र यहाँ के महत्त्वपूर्ण: म चाहनुहुन्छ के काम । यो सार बिचार मा विवाह फ्रान्स मा पनि सबै भन्दा राम्रो विवाह र दीर्घकालीन सम्बन्ध को एक धेरै आवश्यकता काम । तर बस मा काम जस्तै कुराहरू सम्झौता आवश्यक काम मा रहेर सम्बन्ध रोमाञ्चक काम गर्न, पछि लाग्न, स्पार्क गर्न इच्छा, र गर्न सधैं प्रेम मा गिरने छ । अर्को महिला भन्छन्,»जब तपाईं खाने बाहिर जाने, तल राखे आफ्नो बेइमान फोन र छैन काम कुरा वा लाँड्री वा भङ्ग शौचालय छ । थियो एक मानिस कुरा भाँचिएको शौचालय आफ्नो ? अर्को शब्दमा, आफ्नो प्राथमिकता गर्न छ राख्न रोमान्स जीवित छ ।»‘ टिप्न सानो झगडे बोल्न छैन, सानो कुराहरू ।, कहिल्यै नीरस हुन ।»तिनीहरूले व्यापार मा आफ्नो खुसीसाथ कहिल्यै पछि लागि एक आजीवन प्रतिबद्धता को लागि काम संग सम्बन्ध व्यक्ति तिनीहरूले छनौट गर्न एक जीवनकालमा खर्च । र शायद के छ भनेर साँचो प्रेम साँच्चै छ